Shiinaha ahama Steel Round Bar / Rod soo saaraha iyo qeybiye | Kunda
Marka loo eego habka wax soo saarka, baararka biraha birta ah waxaa loo qeybin karaa seddex nooc: kulul oo la duubay, la been abuuray iyo kuwa qabow oo la sawiray. Qeexitaannada biraha wareegsan ee birta ahama ee diirran waa 5.5-250 mm.
201/202/304 / 304L / 316 / 316L / 321/410/420/430 / 440C / S31803 / S38815 / S30601 iwm.
Ballaca: 3mm ~ 800mm
Cabir: 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm
Bar laba jibbaaran
Cabir: 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm
Dhumucdiisuna: 2mm ~ 100mm; Wareeg: 10mm ~ 500mm
Bar lix geesood ah
Cabir: 2mm ~ 100mm
Soosaarista aashitada / Muraayadda Muraayadda / Midabka midabka / Nadiifinta / Nadiifinta Guud
Round / Rektangle / oval / slotted
Muunad waa bilaash waana la heli karaa
Marka loo eego habka wax soo saarka, baararka biraha birta ah waxaa loo qeybin karaa seddex nooc: kulul oo la duubay, la been abuuray iyo kuwa qabow oo la sawiray. Qeexitaannada biraha wareegsan ee birta ahama ee diirran waa 5.5-250 mm. Dhexdooda: 5.5-25mm biraha yar-yar ee birta ah ee birta ah ayaa inta badan lagu bixiyaa xarigyo toosan, oo badanaa loo isticmaalo biro bir ah, boolal iyo qaybo farsamo kala duwan; biraha wareega ee birta ah ee ka weyn 25mm ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo farsamo ama bileysyo biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn.
Kala duwanaanta arjiga:
Ulaha birta ahaanta leh waxay leeyihiin rajo codsi balaaran waxaana si balaaran loogu adeegsadaa qalabka jikada, dhismaha markabka, kiimikada, mashiinada, daawada, cuntada, awooda korontada, tamarta, qurxinta dhismaha, awooda nukliyeerka, aerospace, militariga iyo warshadaha kale! Qalabka loo isticmaalo biyaha badda, kiimikada, dheeha, warqadda, oxalic acid, bacriminta iyo qalabka wax soo saarka kale; warshadaha cuntada, tas-hiilaadka xeebta, xargaha, ulaha CD-ga, boolal, lowska.
Hore: Hot Rolled H Beam Steel
Xiga: Xaashida Aluminium